Nri na nri - Vondt.net
- Etu esi eri nri maka nsị siri ike!
10 / 08 / 2016 /0 Comments/i Nri na nri, quality Articles/av ewute
Otu nnyocha e bipụtara n'akwụkwọ akụkọ nyocha The American Thoracic Society egosila na iri nri ziri ezi nwekwara ike melite ọrụ ngụgụ na ngụgụ ahụike. Ndị ọrụ nyocha ahụ chọpụtara na inwe nri ịba ọcha n'anya jikọtara ọnụ na obere ihe mmadụ nwere ibute ọrịa ngụ.
Ọrịa ngụ bụ nnukwu nsogbu na Norway na ụwa niile. N'ezie, COPD bụ nke atọ na-ebute ọnwụ n'ụwa niile - yabụ ọ bụrụ na ịnwere ike belata ohere nke ọrịa ngụgụ site na iri nri karịa eriri, gụnyere mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, mgbe ahụ ịkwesịrị ime ike gị niile iji kpalie onwe gị ma gbasoo ya.
Nri a na - enweta eriri na ahu ike kacha mma
1921mụ nwoke na ụmụ nwanyị 40 sonyere na ọmụmụ ihe ahụ - ọkachasị n'afọ 70-17.5. Ọmụmụ ihe ahụ weere na ihe ndị na-agbanwe agbanwe dị ka ọnọdụ mmekọrịta akụ na ụba, ị smokingụ sịga, ibu na ọnọdụ ahụike tupu ịmalite ọmụmụ ihe ahụ. Mgbe ha chịkọtara data, ha kewara ndị sonyere dịka oriri fiber n'ime ndị otu dị elu na nke ala. Ndị otu dị elu riri ihe dịka gram 10.75 na otu ụbọchị ma e jiri ya tụnyere ìgwè dị ala nke riri naanị gram XNUMX. Ọbụna mgbe nsonaazụ ahụ gbanwere dịka ihe ndị na-agbanwe agbanwe, enwere ike ịkọwa ya na otu nwere ogo fiber dị elu nwekwara ahụike ahụike ka mma. Have nwere ntinye? Jiri ogige ikwu okwu n'okpuru ma ọ bụ nke anyị Facebook Page.
Nsonaazụ doro anya ma doo anya
N'etiti otu kachasị elu nke nwere eriri 17.5 gram kwa ụbọchị, achọpụtara na 68.3% nwere ọrụ ngụgụ nkịtị. Na obere otu nwere obere eriri nri, a hụrụ na 50.1% nwere ọrụ ngụgụ nke ọma - ọdịiche doro anya ebe ahụ. Omume nke akpa ume mgbochi bụ n'ụzọ doro anya na elu na otu na a ala eriri ọdịnaya - 29.8% vesos 14.8% na ndị ọzọ na otu. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ: Gbalịa iri nri dịgasị iche nke gụnyere akwụkwọ nri, mkpụrụ osisi na ihe ndị ọzọ nwere ọdịnaya dị elu.
Kedụ ka eriri ọkụ nwere ike iwepụta iku ume dị mma?
Ọmụmụ ihe ahụ enweghị ike ikwu na 100% doro anya ihe kpatara eriri ji nye ahụike ka mma, ma ha kwenyere na ọ nwere njikọta na ihe ndị na-egbochi mgbochi mkpịsị. Ha kwenyere na n'ihi eziokwu ahụ bụ na eriri na-atụnye ụtụ na ahịhịa nsị ka mma - nke a ga-emekwa ka mmeghachi omume na-adịghị mma na ọrịa. Mbufụt bụ mgbọrọgwụ nke ọtụtụ ọrịa ngụgụ, na mkpokọta ọnụ ọgụgụ na mmeghachi omume mkpali a nwere ike inwe mmetụta dị mma na ahụike ahụ. A na-ejikọkwa ọdịnaya fiber dị ukwuu na nri belata CRP (C-reactive protein) ọdịnaya - nke bụ onye ọkwọ ụgbọ ala maka ụba mbufụt.
Na nkenke, 'Rịkwuo mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri!' mmechi nke isiokwu a. Ndị nnyocha ahụ kwenyere na anyị ga-eleghara ọgwụ na ọgwụ anya dịka naanị ọgwụgwọ bụ isi maka ọrịa ọrịa akpa ume ma gbado anya na mmụba nri na mgbochi. Nri dị mma kwesịrị n'ezie ijikọ yana mgbatị na mmụba dị elu na ndụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgụ ihe ọmụmụ niile, ị ga-ahụ njikọ na ala nke isiokwu ahụ.
Mmekọrịta dị n'etiti oriri ị na-eri na ọrụ akpa ume na NHANES, Corrine Hanson et al., Akwụkwọ akụkọ nke American Thoracic Society, doi: 10.1513 / AnnalsATS.201509-609OC, nke edepụtara na ntanetị Jenụwarị 19, 2016.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Lunger.jpg?media=1648573622 435 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-08-10 20:25:092022-03-18 17:27:23- Etu esi eri nri maka nsị siri ike!
Cherry lowers Ohere nke gout
02 / 08 / 2016 /0 Comments/i Nri na nri, quality Articles/av ewute
A ọmụmụ bipụtara na magazin nyocha Ogbu na nkwonkwo & Rheumatism egosila na iri cherị nwere ike ịnwe ọgwụgwọ dị ukwuu megide, n'etiti ihe ndị ọzọ, gout. Na-eri mkpụrụ osisi cherị naanị ụbọchị abụọ (!) N'ime afọ ahụ mere ka mbelata 2% na ohere nke tout gout.
gout bụ otu n'ime ụdị ọrịa ogbu na nkwonkwo kachasị - ụdị gout kpatara oke uric acid n'ime ahụ. Icbawanye uric acid n'ime ahụ nwere ike ibute kristal uric acid na nkwonkwo, oge ụfọdụ na mkpịsị ụkwụ ukwu. Ihe a na-ewute Uric acid (nke ana - akpọ tophi) nke na –eme ka obere akpụ n'okpuru anụahụ.
Ọmụmụ ihe dị mkpa iji gosipụta mmeju nke eke
Ọtụtụ ihe mgbakwunye sitere n'okike nwere ike ime ọtụtụ ihe otu ihe ahụ na ọgwụ ọcha na ọgwụ - na-enweghị mmetụta ọ bụla. Ọmụmụ ihe a gosipụtara na cherị, n'ihi ọdịnaya ha dị elu nke antioxidants na mmetụta ndị na-akpata mgbochi mkpali, nwere ọrụ ha ga-arụ na ọgwụgwọ na igbochi ụdị gout - gụnyere gout.
Ọmụmụ ihe ahụ gbasoro ndị sonyere ihe karịrị afọ 1
Ọmụmụ ihe ahụ tụlere ndị sonyere na 633 n'ime afọ kalenda niile. A gbasoro ha na isi ihe dịka mgbaàmà, nsogbu, ihe egwu, ọgwụ na oke oke, oriri nke cherị - ma ụdị oriri (nke sitere na wepụ) yana ugboro ole. Ndị nnyocha ahụ kpebiri na otu cherị cherị bụ ọkara iko - ma ọ bụ cherị nke 10-12.
Nri udara = Ohere di obere nke gout
Mgbe ha gbasoro otu ahụ mgbe afọ 1 gachara, ọnụọgụgụ gosiri na ndị riri cherị - n'ime obere ọrụ 2 n'otu afọ - nwere ohere 35% dị ala na nlọghachi na njirisi gout. A na - ahụkarị na nnukwu cherị - karịa oge - jikọtara ya na mbelata gout. Mgbe ị jikọtara nri cherry na allopurinol (ọgwụ na-ebelata ọdịnaya uric acid) ị hụrụ mbelata ihe dịka 75% na ọgụ ọgụ.
Nri dị mkpa maka ndị na-ata ahụhụ gout. Ndị mmadụ nwere nchoputa nke ọrịa ogbu na nkwonkwo kwesịrị ilekwasị anya na iri nri ndị na-egbochi mkpali na-eri nri na-eri nri na antioxidants. Anyị na-atụ anya nnukwu ọnwụnwa a na-enweghi nsogbu iji jide n'aka na ihe cherị nwere ike imere ndị nwere gout - mana anyị ga-ekwu na ọ dị ezigbo nkwa!
Ọzọkwa gụ: - Mmega 6 megide Sciatica
Zhang et al, Cherry Oriri na Risk nke Ntighari Gout Mmegide
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kirsebær.jpg?media=1648573622 466 700 ewute https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ewute2016-08-02 14:39:152022-03-18 17:26:58Cherry lowers Ohere nke gout
Peeji nke 1 nke 16123>»